Sein Lyan - စိ န် လျှံ: FREEDOM... FREEDOM
Writer Sein Lyan Time 12:18 pm
စိတ်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ရပါစေ၊ ရတဲ့ အခါလဲ အကျိုးရှိရှိ အစွန်းမရောက်ပဲ အသုံးချနိုင်ပါစေ
စိတ်ကြောင့်လဲ မကြေပါစေနဲ့.. နှုတ်ကြောင့်လဲ မသေပါစေနဲ့..
သိပ်ပြီး လွတ်လပ်လွန်းတာလဲ မကောင်းသလို ..
လုံးဝ မလွတ်လပ်လို့ ထွက်ပေါက်ရှာရတာမျိုးလဲ မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်
အဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ပျော်ပါစေ လို့ဆုတောင်းတာနော်။
အရင်တုန်းက ခပ်ကြောင်ကြောင် အတွေးနဲ့ နားလည်ထားတာ FREEDOM= ဒီမိုကရေစီ တဲ့း)
ကိုဖိူးစိန်ကြီး ကျွတ်ပါစေ အယ်လေ လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်တွေအမြန်ခံစားရပါစေဗျာ ။
ဘာတွေများ စိတ်ကျဉ်းကြပ်မှု ခံစားနေရလို့လဲ မောင်လေးဖိုးစိန်?
လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်သော အားလပ်ရက်များ ဖြစ်ပါစေလို့ မဇွန် ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော်။း)
ဖိုးစိန်တို့ကတော့ အားပေးတုန်းလား ???